China Silica ntụ ntụ Manufacturer na Supplier | Dinglong
Mkpụrụ osisi silica anyị bụ ụdị silica kristal ma nwee ịdị ọcha nke 99.3%. Silica ntụ ntụ siri ike, nke na-adịghị arụ ọrụ ma nwee ebe agbaze dị elu, na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru n'ọtụtụ ngwa.
Akwa ike nke 7 (Mohs)
Nnukwu nguzogide kemịkal
Mgbasawanye ọkụ ọkụ
Dinglong silica ntụ ntụ bụ ntụ ọka emebere maka iji rụọ ọrụ na ngwa ọrụ. N'ihi silica ntụ ntụ dị elu, ịdị ike dị elu na nguzogide kemịkal, a na-ejikarị ya eme ihe na nchọpụta, eletrọniki, agba mpụga, iko na ngwa nhụcha.
Dinglong silica powders na-ewu na a crystalline ụdị. Silica silica anyị siri ike, nke na-adịghị arụ ọrụ ma nwee nnukwu agbaze, na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru na nke bara uru n'ọtụtụ ngwa. Na 99.3%, ntụ ọka ndị a bụ ịdị ọcha na ọkọcha ma nwee ike inyere ndị ahịa anyị aka iwulite ngwaahịa na ịdị ọcha dị elu. Dinglong na-etinye oke mkpa iji wuo mmekọrịta mmekọrịta yana ọbụbụenyi na ndị ahịa. Anyị kwenyere na ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya nke ndị ahịa nwere ike ịdabere bụ naanị ụzọ ga-esi nyere anyị aka iru akwa ahụ.
Mmepụta nke silica ntụ ntụ na oke nha nke akọwapụtara chọrọ nhazi nkewa na mgbakwunye igwe enweghị igwe. N'iji nchikota nke egweri na teknụzụ anya, anyị nwere ike ịmịpụta ntụ quartz na ọtụtụ nkesa dị iche iche site na iji ọtụtụ igwe ihe na saịtị. Dinglong quartz powders dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụ ntụ ntụ quartz ndị a na ụlọ ọrụ enyere aka na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Osote: Quartz ntụ ntụ
Buyzụta ntụ silica
Colloidal Silica ntụ ntụ
Ngosiputa Ngwa Ngosiputa Silica
Pure Silica Pure
Powder Silica ntụ ntụ